Nobodoina nymasoivoho Libyana ao Dubai ary nesorina ny saina! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Italiano, bahasa Indonesia, English
Ity lahatsoratra ity dia anisan'ny fitantarana manokana ataonay momba ny Fihetseham-bahoaka 2011 any Libya.
Ho valin'ny famonoana izay nitranga tany Libya sy ny tsy fahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany, ny mpanao fihetsiketsehana ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra, dia nankeny amin'ny masoivoho Libiana ny talata mba hitaky ny fanajanona ny fandatsahan-drà ary hanongana ny Kolonely Muammar Gaddafi.
@Rayyalmulla Sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana Libiana teo akaikin'ny masoivohon'i Libya #dubai, #uae #libya #gadafi #arabrevolutions http://yfrog.com/h7q3gtj
Ireo mpanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny masoivoho Libyana ao Dubai
Niditra ankeriny tao amin'ny konsiolà Lybiana ireo mpanao fihetsiketsehana niaraka tamin'ny fantsom-baovao Al-Arabiya izay nitatitra ny zavanisy teny an-toerana.
@nalshaikh AlArabiya: Niditra ankeriny tao amin'ny masoivoho Lybiana ireo mpanao fihetsiketsehana #Dubai & ary nanimba sy nanimbazimba ny sarin'i #Gaddafi. #Feb17 #Libya
@MohannadKhairy Tafiditra soamantsara tao amin'ny masoivoho Lybiana ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanala ny sainam-pirenena sy hiantso ho amin'ny demokrasia malalaka sy mendrika
Tweep Danya B Mohammed (@ceoDanya) izay mihevitra ny tenany ho ” Filohan'ny Lybiana atsy ho atsy.” dia ni-tweet [nisioka an-tserasera] ny zava-nitranga nanomboka ny fidirana tao amin'ny masoivoho Libyana:
@ceoDanya Ho an'ny rehetra eto Emirà Arabo mitambatra!! Iangaviko ianareo hiaraka amiko ho any amin'ny ambassady Libyana eto UAE mba hanohitra ny zava-misy, nefa mety ho samborina ianareo.
@ceoDanya FANOHERANA TAO UAE !!!! Ya rab [Tompo ô! henoy ny vavakay, enga anie ny kelb (alika) mba tsy ho ao
Nanohy ny fampilazana tamin'ny alalan'ny tweeter tamin’ ireo mpanao gazety vahiny izy fa ireo mpanao fihetsiketsehana dia voahidy tao amin'ny masoivoho.
@ceoDanya NOHIDIANDRY ZAREO TAO ANATIN'NY KONSIOLA NY VAHOAKA LIBYANA ETO UAE @ABC @CNN @andersoncooper @BBC HELP!!! We can't get OUT!!!
Na dia voahidy aza izy ireo, dia nanohy ny tolona mba hanala ny saina maitson'ny Libya izay napetrak'i Kolonely Kadhafi voalohany, maka tahaka ny fihetsika nataon'ny mpanao fihetsiketsehana nanala ny sainan'i Libya maitso ankehitriny nosoloiny ny lokontsaina taloha nataon'izy ireo tao Benghazi.
@ceoDanya Efa nesorina ny saina tao UAE!!! Kanefa dia mbola nohidian'izy ireo tao anatiny ihany izahay !! @SultanAlQassemi @ShababLibya
@allawati Nesorina ny saina tamin'ny fitondrana tao amin'ny masoivoho Libyana ao Dubai http://twitpic.com/42in89
Saina Libyana nesorina teo amin ny andry manoloana ny masoivoho Libyana ao Dubai, UAE
@ceoDanya Nivoaka izahay ! ary hahazo ny fankatoavana ofisialy hanao fihetsiketseham-bahoaka izahay rahampitso #SAVELIBYA #Gadaffi. @SultanAlQassemi UAE
Voahidy mandritra ny ora roa alohan'ny namoahana azy ireo mpanao fihetsiketsehana.
@ceoDanya Nanomboka tamin'ny 10:30 maraina ka hatramin'ny 3:00 tolakandro no voahidy tao amin'ny masoivoho nandritra ny adin'ny roa izy ireo! DUBAI #PROTEST LIBYAN NATIONALTIES
Ity lahatsoratra ity dia fintatarana manokana ataonay momba ny fihetseham-bahoaka 2011 any Lybia 2011